Warqad Afrika ka timid: ‚Waxaan ka quustay inaan raaco tareenka Itoobiya. – Xeernews24
Warqad Afrika ka timid: ‚Waxaan ka quustay inaan raaco tareenka Itoobiya.
8. September 2019 /in WARAR/NEWS /von admin
Warqadaha taxaha ah ee inaga soo gaaraya weriyayaasha Afrika, ayuu Ismaaciil Einashe waxa uu wax ka qoray iskudaygiisa dhicisoobay ee uu ku doonayay inuu ku raaco tareenka Itoobiya, walow tareenkan uu yahay mid caan ah oo cusub oo uu Shiinuhu dhisay.
Caasimadda Itoobiya ee Addis Ababa, waa ay adag tahay inaad ku arki wayso taboolooyinka waa weyn ee xayeysiinta ah ee ku dhinac dheggan waddooyinka iyo isgoysyada ee ay ku qoran yihiin „tareen cusub, nolol cusub“.
Calaamadaha ayaa muujinaya khadka tareenka Shiinuhu uu ku dhisay $4.5 bilyan oo doolaar kaas oo isku xiraya magaalooyinka Addis Ababa iyo Jabuuti, kuna xiraya dalkan aan badda lahayn ee Itoobiya ee ay dadkiisu yihiin 100 milyan ee qof dalka yar ee Jabuuti ee ku yaal Badda Cas.
Khadkan tareenka oo dhirirkiisu uu dhan yahay 750km ayaa waxa uu shaqo bilaabay bishii Janaayo 2018, waana midkii ugu horreeyay ee koronto ku shaqeynaya ee Afrika ee xadad dalal isaga gudba.
Tareenku wuxuu ku dhacaa geel
Dalka Itoobiya tareenkan mashruuc kaliya uma ahan ee waxa uu uga dhigan yahay jowharad dahab ah oo astaan u ah himilooyinkeeda horumarka ee salka ku haya dhaqaalaha ugu koboca badan qaaradda Afrika, taas oo uu ujeedku yahay in dalkaas uu ku galo dabaqadda dhexe wixii loo gaaro bartamaha 2020-yada.
Shiinaha ayaa maalgashade weyn ka noqday waddanka Itoobiya
Hasayeeshee tan iyo markii la furay khadkan tareenka casriga ah ayaa waxaa soo foodsaaray culeys dhinaca dhaqaalaha iyo howlgalkaba.
Bishii Janaayo waxaa muddo la hakiyay adeegyada tareenka walaac laga qabo ammaanka gobolka Afar-ta, kaddib dibadbaxyo loogaga soo horjeedo dowladda iyo iskudhacyo u dhaxeeyay qowmiyadaha Soomaalida iyo Afar-ta.
Joogsiga howlaha tareenka ayaa sannadkii hore waxaa sababay markii tareenku uu ku dhacay geel, taas oo horseedday in xooladhaqatadu dowladda ka dalbadaan in la siiyo magdhaw xoolaha qiimaha badan ee laga laayay.
Booqashada xaruntii hore ee uu Faransiisku dhisay
Sidaas oo ay tahay tan iyo markii aan maqlay in khadkan tareenka casriga ah laga furay gudaha dalka Itoobiya waxaan aad u rabay inaan raaco, tareenkan oo dhaqaaqo maalinkasta 0800 subaxnimo waqtiga maxalliga ah.
Waxaan qorsheeyay inaan tareenka ka raaco Addis Ababa oo aan ku tago magaalada Dire Dawa oo ah magaalo kale oo ku taal Itoobiya oo aanan arag 25-kii sannadood ee la soo dhaafay.
Xarun cusub oo uu gacan ka gaystay Shiinaha ayaa waxaa Addis Ababa laga furay 2016
Hasayeeshee farxadeydii waxa ay durbadiiba isu badeshay niyadjab markii aan xaqiiqsaday sida ay u adag tahay in tigidh la iibsado – dalkan dariska ah ee Kenya waxaad booqanaysaa barta internetka ee khadka tareenka, halkaas ayaadna tigidhkaaga ka iibsanaysaa lacagtana mobile-ka ayaad ku dhiibaysaa, adeegga mPesa la yiraahdo, balse Itoobiya arrimuhu waa ay yara adag yihiin.
Waxaan booqday barta internetka ee khadka tareenka ee Itoobiya waxaan ka helay oo kaliya dhowr xafiis oo tigidhada lagu jaro, xafiisyadaas oo ku yaal xarumaha tareenka qadiimiga ee uu Faransiiska Addis Ababa ka dhisay ee dhaca bartamaha magaalada.
Waan wacay oon wacay, balse cid iga qabatay taleefanka ma aanay jirin. Markii dambe waxaan ku qasbanaaday inaan toos u tago dhismaha qadiimiga ah ee tareenka.
Khadka tareenka ee Itoobiya ee tobannaan sanadood ka hor la iska ilaaway
Markii aan halkaas gaaray, sikasta oo uu xaal ahaadaba, inaan helo xafiiska tigidhada ayaa sidoo kale igu adkaatay. Waardiyuhu wuxuu u muuqday inuu la yaabay waxa aan waydiinaayo.
Markii aan xafiiska ka helay dabaqa koobaad, haweeney dhinac fadhisa miis alwaax ka samaysan ayaa iyana waxa ay u muuqatay mid la yaaban codsigayga ah inaan helo tigidh aan ku laabto.
Waxa ay ii sheegtay inaan sugo maamulaheeda. Isagiina waxa uu yiri ma aynu gadno tigidhada lagu laabto, ee haddii aad doonaysid tigidhada baska waad iibsan kartaa.
Haddii aan tareenka doonayo ayaan waydiiyay, waxa uu igu yiri waxaad aaddaa xarunta cusub ee uu Shiinuhu dhisay ee ku taal afaafka hore ee magaalada Addis Ababa halkaasna tigidhkayga ka iibso.
Maareeyaha ayaa waxa uu ii xaqiijiyay in tareenka casriga ah uu shaqeynayo, hasayeeshee waxa uu igula taliyay inaan arooryo hore tago – wixii loo gaaro 06:30.
Waxaan dareemay waxoogaa nafis ah, ilaa aan dhibaatadii xigtay kala kulmay – taas oo aheyd sidii aan ku heli lahaa goobta uu ku yaal tareenkan cusub.
Howl fudud ma aanay ahayn, waa midda koobaadee xarunta weli khariidadeeda lama gelin Google Mapska, dadka deegaankana waxba kalamaba socdaan waxa aan waydiinaayay.
Waxaa qasab ku noqotay inuu diyaarad raaco
Inta aan ogohay qof ka shaqeeya hoteel ayaa waxa uu iisoo helay darawal taksi, kaas oo ii sheegay in 90-daqiiqadood loo sii soconaayo xarunta tareenka – $18-na uu iga qaadaayo, kaas oo sida tareenka oo kale qaali u ah.
Waxaannu baxnay xilli mugdi ah oo qabow oo dhado ay dhacayso waa aroor Talaada ah abaare 05:00.
Waxaannu ka gudubnay degmada Bole ee Addis Ababa, halkaas oo aan ku noolaan jiray – haatanse wax badan ayey goobtu isbadeshay: waxaa aad looga dhisay hoteello cusub iyo goobo loo dukaamaysi tago oo waa weyn.
Wadadii laamiga aheyd ayaan ugu dambayntii ka baxnay oo waxaannu dhowr kiilo mitir ku soconnay waddo raf ah oo boor badan ka hor inta uusan inoo soo muuqan dhismaha weyn ee xarunta tareenka ee Furi-Labu.
Xarunta cusub ee tareenka ayey aheyd inay noqoto goob ay ku faanaan Itoobiyaanka
Dhismaha oo u muuqdo mid si toos ah looga soo raray waddanka Shiinaha oo Itoobiya mar qura la keenay, ayaanay cidina joogin – oo waxaa jooga oo kaliya askari ilaalinaya, iyo dhowr howlwadeen oo Shiinees ah oo xarunta dhex wareegaya.
Waxa ay u muuqataa goob laga guuray. Waxaan ku lugeeyay jaranjarooyinka waa weyn, waxaanan la hadlay askarigii kaas oo ii sheegay in xarunta ay xiran tahay ugu „laba todobaad“ maadaama ay cilad ka jirto meel u dhaw magaalada Dire Dawa.
Wax tareen ah oo subaxaas baxayay ma uusan jirin.
Waxaan dib ugu laabtay hoteelka – haddana dhulkii roob badan baa ka da’ay oo dhiiqo ayaanan lala socon karin – marka waxaan ku qasbanaaday inaan diyaarad raaco.
Hasayeeshee internetka ayaa aad u liitay – oo maalmahaasi waxa ay aheyd arrin iska caadi ah gudaha Itoobiya – marka waxaan qaatay taleefanka oo duulimaadkii ayaan qabsaday.
Waqtigii aan tareenka ku tegi lahaa maalintaas xarunta cusub ee magaalada Dire Dawa abaare 15.50 ayaa waxaan ku sugnaa dhismaha diyaaradaha laga raaco ee garoonka diyaaradaha ee Addis Ababa oo waxaan sugayay in diyaaradda ay soo istaagto oo ganjeelka naloo furo.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2016/10/91527342_035500039-1.jpg 351 624 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-09-08 23:06:102019-09-08 23:06:38Warqad Afrika ka timid: 'Waxaan ka quustay inaan raaco tareenka Itoobiya.
Waa Dhalinta reer Cosob(Cundhufo) oo isku Xilqaamay iskood in ay wax qabsad... Xarunta Dhaqanka Hargaysa:Xarunta Sharka Iyo Shaydaanka!W/Q:Cali Coomay.